Thola iphasiwedi ye-Wi-Fi ngenxa yohlelo lokusebenza lwama-Keychains ku-Mac yakho | Ngivela kwa-mac
Thola iphasiwedi ye-Wi-Fi ngenxa yohlelo lokusebenza lwama-Keychains ku-Mac yakho
Ngezizathu zokuphepha, basincoma ukuthi sishintshe amaphasiwedi esinawo ngokuzenzakalela kumanethiwekhi wethu we-Wi-Fi. Ukukhohlwa iphasiwedi ye-Wi-Fi yendlu yethu noma yebhizinisi kuyinkimbinkimbi, kepha kungenzeka ukuthi ukhohlwe iphasiwedi i-router eyayinayo lapho ungavamile ukuxhuma khona, njengendawo yokuhlala yesibili noma indlu yesihlobo.
Uma lokhu kuyindaba yakho, akutshele lokho iMac yethu igcina amaphasiwedi wamanethiwekhi esixhume kuwo njalo. Ezinguqulweni zakamuva ze-macOS, lolu lwazi, kanye namanye amaphasiwedi, ligcinwa kuhlelo lokusebenza lwe-Keychains. Sikufundisa ukuthi uthintane nayo.
Owokuqala uzoba vula uhlelo. Lokhu kufolda yezicelo, esizoyithola kusuka ku-Finder. Enye indlela esheshayo nge-Spotlight, ngokucindezela ngqo isikhala se-Cmd + nokuthayipha igama lohlelo lokusebenza, kulokhu ama-Keychains.
Lapho uhlelo lokusebenza seluvulekile, ungakhathazeki ngenani lemininingwane oyibonayo okwamanje. Kufanele nje yazi igama lenethiwekhi ofuna ukuxhuma kuyo futhi ulibheke ebhokisini phezulu ngakwesokudla wohlelo lokusebenza. Ngaleso sikhathi kufanele ushiywe nolayini owodwa noma emibili, ezoqukatha imininingwane oyifunayo.
Manje kufanele qhafaza kwesokudla igundane noma cindezela ngokuvamile ngeminwe emibili ku-trackpad. Kumenyu yokuqukethwe evelayo, chofoza ukuthola imininingwane. Kuvela iwindi elinolwazi maqondana nephasiwedi esiyicelayo. Ukwazi iphasiwedi esiyifunayo kufanele sichofoze ezansi, ebhokisini elikhombisa: «Khombisa Iphasiwedi» Ngemuva kokucindezela, izosicela iphasiwedi yokuphepha.
Kumele siyethule. Iphasiwedi izobe isikhonjiswa kithi. Manje sesingakwazi ukukopisha nokunamathisela iphasiwedi ngokushesha lapho isicela ukuthi singene kule nethiwekhi ye-Wi-Fi.
Ama-Keychains asebenza nge-password ye-Wi-Fi, kepha agcina noma yimaphi amanye amaphasiwedi esikutshele wona ukusigcinela yona. Uma kunjalo, singaba nawo amaphasiwedi we-imeyili, inethiwekhi yokuxhumana nomphakathi noma isitolo esiku-inthanethi phakathi kwabanye.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Thola iphasiwedi ye-Wi-Fi ngenxa yohlelo lokusebenza lwama-Keychains ku-Mac yakho
IWindows Defender iza ku-Chrome ukuvikela iMac yethu
Amalungelo obunikazi e-Apple ikesi elisha lama-AirPods ngokudluliswa kwentambo nokunye okuningi